ကတျတလနျ ၊ Brexit တို့နဲ့ နိုငျငံရေးကွောငျ့ အရောငျစှနျးထငျးရတော့မယျ့ အားကစားလောက . . . - SPORTS MYANMAR
ကတျတလနျ ၊ Brexit တို့နဲ့ နိုငျငံရေးကွောငျ့ အရောငျစှနျးထငျးရတော့မယျ့ အားကစားလောက . . .
By Edi Tor October 21, 2019
ဘောလုံး ဟာ ကမ်ဘာ ပျေါမှာ လူကွိုကျ အမြားဆုံး အားကစား နညျးပါ ။ နာမညျကြျော အားကစား သမား အမညျတှကေို ခြ ရေး ကွညျ့မယျ ဆိုရငျ ဘောလုံး သမား အမညျ က တငျးနဈ ၊ ဂေါ့ဖျ ၊ ဘကျစကတျဘော နဲ့ အခွား အားကစား နညျးက နာမညျကြျောတှေ ထကျ အဆမတနျ ပိုမြားနမှော အသေ အခြာ ပါပဲ ။ ဒါပမေယျ့ အားကစား နညျးတှကေို ခုံမငျ နှဈသကျ ကွပုံခငျြး ၊ အရူး အမူး အားပေး ကွပုံခငျြး က တော့ အ တူ တူ ပဲ ဖွဈကွမှာပါ ။
ဒီလို လူကွိုကျမြားတဲ့ အားကစား ဟာ ခတျေတှေ ပွောငျးလာတာ နဲ့ အမြှ ပုံစံ တှေ ပွောငျးလဲ လာခဲ့ ပါပွီ ။ အားကစား လောက အတှငျးမှာ ကိုပဲ ရစေီးကွောငျး အပွောငျးအလဲ တှေ စတငျ နခေဲ့ ပါပွီ ။ ဘောလုံး သမား တှေ ဟာ အရငျတုနျးက လို ရိုးရိုး အေးအေး နထေိုငျပွီး ဘောလုံး ကိုပဲ အာရုံစိုကျ ကစားကွတာ မဟုတျတော့ ပါဘူး ။ ဆိုရှယျမီဒီယာတှေ ပျေါ မှာ အခြိနျတှေ ပိုပေးလာတယျ ၊ အဝတျ အစားတှေ ၊ ဖကျရှငျတှေ ၊ ကားတှေ ၊ ဇိမျခံ အသုံးအဆောငျ တှေ ပျေါမှာ ပိုမို ပြျောမွူး လာခဲ့ကွပါတယျ ။ ဒါတှေ ဟာ အစပဲ ရှိပါသေးတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဒါတှေ ထကျ ပိုပွီး စိုးရိမျရမယျ့ ကိစ်စ တှေ က လတျတလော မှာ ရှိနခေဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့ဒါကတော့ နိုငျငံရေး ကိစ်စ တှပေါ ။ အခု ကတျတလနျ မှာ အခွအေနေ တှေ က တျောတျောလေး ပွငျးထနျ နပေါတယျ ။ ဒါကွောငျ့ အောကျတိုဘာ ၂၆ မှာ ကစားမယျ့ ဘာစီလိုနာ – ရီးရဲ မကျဒရဈ ပှဲ ကို တောငျ ရှေ့ လိုကျရ ပါပွီ ။ ဒီလို ရှလေို့ကျ ရတာ က ဘယျ အသငျးအတှကျ အကြိုး ပို ရှိသှား စမေလဲ ဆိုတာ တော့ မသိနိုငျ ပါဘူး ။ သခြောတာ ကတော့ တဈခုခု အပွောငျး အလဲ ဖွဈလာဖို့ ကံတရားက စီမံ လာခဲ့ တာပါ ။
Brexit ဆိုတာ ကတော့ ဥရောပ ကနေ ဗွိတိနျ တို့ ခှဲထှကျ တာပါပဲ ။ ဗွိတိနျ ကြှနျးစု နိုငျငံတှေ ဖွဈတဲ့ အင်ျဂလနျ ၊ စကော့တလနျ ၊ အိုငျယာနျ နဲ့ မွောကျ အိုငျယာလနျ တို့ဟာ ဥရောပ ယူနီယံကွီး ကနေ ခှဲထှကျ ပွီး သီးခွား ရပျတညျ ဖို့ အစီအစဉျ တှေ ရေးဆှဲ နပွေီလို့ အသံလှငျ့ ထားခဲ့တာ ကွာပါပွီ ။ အခု ထိ တော့ အလုံးစုံ အကောငျ အထညျ မပျေါ သေးပါဘူး ။
Brexit သာ တကယျ ဖွဈလာ ခဲ့ရငျ စီးပှားရေး ၊ ကုနျစညျ ကူးသနျးရောငျးဝယျ ရေး ကဏ်ဍ တှေ ပွောငျးလဲ ကုနျ မှာပါ ။ အားကစား မှာလညျး ဒီလို ပါပဲ ။ ဗွိတိနျ က ခှဲထှကျ မယျ ဆိုရငျ အင်ျဂလနျ ပရီးမီးယားလိဂျ အပါ အဝငျ စကော့လိဂျ တို့ ဟာ UEFA ကနေ ကငျးလှတျ သှားမှာ ဖွဈပွီး ခနျြပီယံ လိဂျ ပွိုငျပှဲ ကနေ လညျး ထှကျရဖှယျ ရှိ ပါတယျ ။
ငှကွေေး တောငျ့တငျး တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂျ ကတော့ ဒါကို ကွံကွံခံ နိုငျမယျ လို့ ယုံကွညျထား ပမေယျ့ ပွညျပ ကစား သမား ၀ငျထှကျမှု မှာတော့ အကွီး အကယျြ ပွောငျးလဲ သှားနိုငျ ပါတယျ ။ မကွာသေးခငျ က ပဲ ဗွိတိနျ ရဲ့ ဥပဒေ ကြှမျးကငျြ တဈဦးက Brexit ပွုလုပျပွီး ပါက အပွဈဒဏျ ကခြံ ထားရတဲ့ သူတှကေို ဗွိတိနျ အတှငျး ၀ငျခှငျ့ မပွု မယျ့ အဆိုကို တငျသှားမယျ လို့ဆိုလာ ခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါဟာ အခှနျရှောငျလှဲ ခဲ့တာကွောငျ့ ဆိုငျးငံ့ ထောငျဒဏျတှေ ကခြံ ထားရတဲ့ မကျဆီ ၊ နမော အပါ အဝငျ အခွား သော ကစား သမားတှေ အနနေဲ့ ဗွိတိနျ ကြှနျးစု ကို ခွခြေ ခှငျ့ ရရှိတော့ မှာ မဟုတျဘဲ ပရီးမီးယားလိဂျ ကို လညျး လာရောကျ ကစားနိုငျ တော့ မှာ မဟုတျပါဘူး ။ ဒါပမေယျ့ Brexit ဟာ တကယျ ဖွဈမလာ သေးဘဲ နိုငျငံရေးလှညျ့ကှကျ တဈခု လညျး ဖွဈကောငျး ဖွဈလာ နိုငျ ပါတယျ ။
ကတျတလနျ ဒသေ က တော့ ဗွိတိနျ လို မဟုတျဘဲ အမှနျ တကယျကွီး ခှဲထှကျ ဖို့ ဆုံးဖွတျ ထားတာပါ ။ စပိနျ ရဲ့ လကျအောကျခံ ဒသေအဖွဈ ရှိမနခေငျြ တော့တာ ကွောငျ့ ကတျတလနျ ကို သီးခွား လှတျလပျခှငျ့ ပွု့ပီး နိုငျငံ ထူထောငျ ဖို့ ဒသေခံ နိုငျငံရေး သမားတှေ စီစဉျ နခေဲ့တာ ကွာခဲ့ ပါပွီ ။
တကယျလို့ ကတျတလနျ သာ ခှဲထှကျ သှားခဲ့ရငျ ဒီဒသေထဲ မှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံး အသငျးတှေ ( ဘာစီလိုနာ ၊ အကျဈပနျညို ၊ ဂရနျနာဒါ ) ဟာ လာလီဂါ မှာ ၀ငျ ကစားခှငျ့ ရဖို့ မသခြောတော့ ပါဘူး ။ အစောပိုငျး နှဈတှေ တုနျးက ဘာစီလိုနာ နဲ့ အကျဈပနျညို တို့ ဟာ ကတျတလနျ ခှဲထှကျ ခဲ့ပါက အင်ျဂလနျ နဲ့ ပွငျသဈ လိဂျတှေ မှာ ၀ငျကစား ဖို့ ညှိနှိုငျး နတေယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျခဲ့ ဖူး ပါတယျ ။
ခှဲထှကျကွပွီ ဆိုရငျတော့ ကောငျးတာရော ဆိုးတာပါ ဖွဈလာ မှာပါပဲ ။ ကဏ်ဍ တဈခု တညျး ရဲ့ အကြိုးကို ကွညျ့လို့ မရတော့ ပါဘူး ။ နောကျပွီး ဒါဟာ ရှုပျထှေးတဲ့ နိုငျငံရေး ကိစ်စ ဖွဈတာကွောငျ့ ဒီလို ခှဲထှကျမှု တှေ ဟာ အားကစား အပါ အဝငျ အခွား ကဏ်ဍ တှကေို ရိုကျခတျ လာမှာ အသအေခြာ ပါပဲ ။
အားကစား ဟာ အရငျတုနျးက အရောငျ အဆငျး မရှိဘဲ ရိုးရိုး ရှငျးရှငျး ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။ ကစား သမားတှေ အားလုံး ဟာ အားကစား စိတျဓါတျ အပွညျ့ ရှိကွသလို ပွိုငျပှဲတှေ ဟာလညျး ပွိုငျပှဲ အရသာ အပွညျ့အဝ ရှိခဲ့ကွ ပါတယျ ။ အောငျမွငျမှု ရဖို့ သှေးတှေ ခြှေးတှေ ဇှဲလုံ့လ ၀ီရိယ အပွညျ့ နဲ့ ယှဉျပွိုငျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ အားကစား ဟာ အားကစားဆနျခဲ့ ပါတယျ ။
အခု အခြိနျ မှာတော့ အားကစား ဟာ စီးပှားရေး ဆနျလာ ကွပါပွီ ။ အရောငျတှေ ဆိုးခံ နရေ ပါပွီ ။ ဒါကို နိုငျငံရေး ကိစ်စ တှေ နဲ့ အရောငျ ထပျဆိုး ကွတော့ မှာပါ ။ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာ မလဲ ဆိုတာ မှနျးရ ခကျပမေယျ့ စိတျမကောငျး စရာတှေ ကတော့ အနညျးနဲ့ အမြားဆို သလို ပါလာ မှာ အသေ အခြာ ပါပဲ ။
ကတ်တလန် ၊ Brexit တို့နဲ့ နိုင်ငံရေးကြောင့် အရောင်စွန်းထင်းရတော့မယ့် အားကစားလောက . . .
ဘောလုံး ဟာ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာ လူကြိုက် အများဆုံး အားကစား နည်းပါ ။ နာမည်ကျော် အားကစား သမား အမည်တွေကို ချ ရေး ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဘောလုံး သမား အမည် က တင်းနစ် ၊ ဂေါ့ဖ် ၊ ဘက်စကတ်ဘော နဲ့ အခြား အားကစား နည်းက နာမည်ကျော်တွေ ထက် အဆမတန် ပိုများနေမှာ အသေ အချာ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် အားကစား နည်းတွေကို ခုံမင် နှစ်သက် ကြပုံချင်း ၊ အရူး အမူး အားပေး ကြပုံချင်း က တော့ အ တူ တူ ပဲ ဖြစ်ကြမှာပါ ။
ဒီလို လူကြိုက်များတဲ့ အားကစား ဟာ ခေတ်တွေ ပြောင်းလာတာ နဲ့ အမျှ ပုံစံ တွေ ပြောင်းလဲ လာခဲ့ ပါပြီ ။ အားကစား လောက အတွင်းမှာ ကိုပဲ ရေစီးကြောင်း အပြောင်းအလဲ တွေ စတင် နေခဲ့ ပါပြီ ။ ဘောလုံး သမား တွေ ဟာ အရင်တုန်းက လို ရိုးရိုး အေးအေး နေထိုင်ပြီး ဘောလုံး ကိုပဲ အာရုံစိုက် ကစားကြတာ မဟုတ်တော့ ပါဘူး ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ပေါ် မှာ အချိန်တွေ ပိုပေးလာတယ် ၊ အ၀တ် အစားတွေ ၊ ဖက်ရှင်တွေ ၊ ကားတွေ ၊ ဇိမ်ခံ အသုံးအဆောင် တွေ ပေါ်မှာ ပိုမို ပျော်မြူး လာခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါတွေ ဟာ အစပဲ ရှိပါသေးတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဒါတွေ ထက် ပိုပြီး စိုးရိမ်ရမယ့် ကိစ္စ တွေ က လတ်တလော မှာ ရှိနေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့ဒါကတော့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စ တွေပါ ။ အခု ကတ်တလန် မှာ အခြေအနေ တွေ က တော်တော်လေး ပြင်းထန် နေပါတယ် ။ ဒါကြောင့် အောက်တိုဘာ ၂၆ မှာ ကစားမယ့် ဘာစီလိုနာ – ရီးရဲ မက်ဒရစ် ပွဲ ကို တောင် ရွှေ့ လိုက်ရ ပါပြီ ။ ဒီလို ရွှေ့လိုက် ရတာ က ဘယ် အသင်းအတွက် အကျိုး ပို ရှိသွား စေမလဲ ဆိုတာ တော့ မသိနိုင် ပါဘူး ။ သေချာတာ ကတော့ တစ်ခုခု အပြောင်း အလဲ ဖြစ်လာဖို့ ကံတရားက စီမံ လာခဲ့ တာပါ ။
Brexit ဆိုတာ ကတော့ ဥရောပ ကနေ ဗြိတိန် တို့ ခွဲထွက် တာပါပဲ ။ ဗြိတိန် ကျွန်းစု နိုင်ငံတွေ ဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန် ၊ စကော့တလန် ၊ အိုင်ယာန် နဲ့ မြောက် အိုင်ယာလန် တို့ဟာ ဥရောပ ယူနီယံကြီး ကနေ ခွဲထွက် ပြီး သီးခြား ရပ်တည် ဖို့ အစီအစဉ် တွေ ရေးဆွဲ နေပြီလို့ အသံလွှင့် ထားခဲ့တာ ကြာပါပြီ ။ အခု ထိ တော့ အလုံးစုံ အကောင် အထည် မပေါ် သေးပါဘူး ။
Brexit သာ တကယ် ဖြစ်လာ ခဲ့ရင် စီးပွားရေး ၊ ကုန်စည် ကူးသန်းရောင်းဝယ် ရေး ကဏ္ဍ တွေ ပြောင်းလဲ ကုန် မှာပါ ။ အားကစား မှာလည်း ဒီလို ပါပဲ ။ ဗြိတိန် က ခွဲထွက် မယ် ဆိုရင် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် အပါ အ၀င် စကော့လိဂ် တို့ ဟာ UEFA ကနေ ကင်းလွတ် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ချန်ပီယံ လိဂ် ပြိုင်ပွဲ ကနေ လည်း ထွက်ရဖွယ် ရှိ ပါတယ် ။
ငွေကြေး တောင့်တင်း တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကတော့ ဒါကို ကြံကြံခံ နိုင်မယ် လို့ ယုံကြည်ထား ပေမယ့် ပြည်ပ ကစား သမား ၀င်ထွက်မှု မှာတော့ အကြီး အကျယ် ပြောင်းလဲ သွားနိုင် ပါတယ် ။ မကြာသေးခင် က ပဲ ဗြိတိန် ရဲ့ ဥပဒေ ကျွမ်းကျင် တစ်ဦးက Brexit ပြုလုပ်ပြီး ပါက အပြစ်ဒဏ် ကျခံ ထားရတဲ့ သူတွေကို ဗြိတိန် အတွင်း ၀င်ခွင့် မပြု မယ့် အဆိုကို တင်သွားမယ် လို့ဆိုလာ ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါဟာ အခွန်ရှောင်လွှဲ ခဲ့တာကြောင့် ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒဏ်တွေ ကျခံ ထားရတဲ့ မက်ဆီ ၊ နေမာ အပါ အ၀င် အခြား သော ကစား သမားတွေ အနေနဲ့ ဗြိတိန် ကျွန်းစု ကို ခြေချ ခွင့် ရရှိတော့ မှာ မဟုတ်ဘဲ ပရီးမီးယားလိဂ် ကို လည်း လာရောက် ကစားနိုင် တော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် Brexit ဟာ တကယ် ဖြစ်မလာ သေးဘဲ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက် တစ်ခု လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာ နိုင် ပါတယ် ။
ကတ်တလန် ဒေသ က တော့ ဗြိတိန် လို မဟုတ်ဘဲ အမှန် တကယ်ကြီး ခွဲထွက် ဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားတာပါ ။ စပိန် ရဲ့ လက်အောက်ခံ ဒေသအဖြစ် ရှိမနေချင် တော့တာ ကြောင့် ကတ်တလန် ကို သီးခြား လွတ်လပ်ခွင့် ပြု့ပီး နိုင်ငံ ထူထောင် ဖို့ ဒေသခံ နိုင်ငံရေး သမားတွေ စီစဉ် နေခဲ့တာ ကြာခဲ့ ပါပြီ ။
တကယ်လို့ ကတ်တလန် သာ ခွဲထွက် သွားခဲ့ရင် ဒီဒေသထဲ မှာ ရှိတဲ့ ဘောလုံး အသင်းတွေ ( ဘာစီလိုနာ ၊ အက်စ်ပန်ညို ၊ ဂရန်နာဒါ ) ဟာ လာလီဂါ မှာ ၀င် ကစားခွင့် ရဖို့ မသေချာတော့ ပါဘူး ။ အစောပိုင်း နှစ်တွေ တုန်းက ဘာစီလိုနာ နဲ့ အက်စ်ပန်ညို တို့ ဟာ ကတ်တလန် ခွဲထွက် ခဲ့ပါက အင်္ဂလန် နဲ့ ပြင်သစ် လိဂ်တွေ မှာ ၀င်ကစား ဖို့ ညှိနှိုင်း နေတယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်ခဲ့ ဖူး ပါတယ် ။
ခွဲထွက်ကြပြီ ဆိုရင်တော့ ကောင်းတာရော ဆိုးတာပါ ဖြစ်လာ မှာပါပဲ ။ ကဏ္ဍ တစ်ခု တည်း ရဲ့ အကျိုးကို ကြည့်လို့ မရတော့ ပါဘူး ။ နောက်ပြီး ဒါဟာ ရှုပ်ထွေးတဲ့ နိုင်ငံရေး ကိစ္စ ဖြစ်တာကြောင့် ဒီလို ခွဲထွက်မှု တွေ ဟာ အားကစား အပါ အ၀င် အခြား ကဏ္ဍ တွေကို ရိုက်ခတ် လာမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။
အားကစား ဟာ အရင်တုန်းက အရောင် အဆင်း မရှိဘဲ ရိုးရိုး ရှင်းရှင်း ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။ ကစား သမားတွေ အားလုံး ဟာ အားကစား စိတ်ဓါတ် အပြည့် ရှိကြသလို ပြိုင်ပွဲတွေ ဟာလည်း ပြိုင်ပွဲ အရသာ အပြည့်အ၀ ရှိခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အောင်မြင်မှု ရဖို့ သွေးတွေ ချွေးတွေ ဇွဲလုံ့လ ၀ီရိယ အပြည့် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ အားကစား ဟာ အားကစားဆန်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခု အချိန် မှာတော့ အားကစား ဟာ စီးပွားရေး ဆန်လာ ကြပါပြီ ။ အရောင်တွေ ဆိုးခံ နေရ ပါပြီ ။ ဒါကို နိုင်ငံရေး ကိစ္စ တွေ နဲ့ အရောင် ထပ်ဆိုး ကြတော့ မှာပါ ။ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာ မလဲ ဆိုတာ မှန်းရ ခက်ပေမယ့် စိတ်မကောင်း စရာတွေ ကတော့ အနည်းနဲ့ အများဆို သလို ပါလာ မှာ အသေ အချာ ပါပဲ ။